तिरस्कार र पुरस्कारमा विषादको घेरो | चितवन पोष्ट
तिरस्कार र पुरस्कारमा विषादको घेरो
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन हुनुहुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथमा उहाँको जन्म जिल्ला कास्कीको रामघाटमा दाहसंस्कार गरियो । देशले सात जना सपूतलाई उक्त घटनामा गुमायो । यसको अर्थ देशले दिनहुँजसो छोटो या लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातमा शोक भोगिरहँदा कुनै शोक महान् र कुनै सामान्य बन्न सक्दैन । आखिर सबै खाले, सबै प्रकृतिका दुर्घटनामा सबै जनताको पीडा बराबर हो । तर, यहाँ प्रसङ्ग मन्त्री अधिकारीलगायतका निधनको खबरका पेचिया पक्षमा केन्द्रित छ । मन्त्री अधिकारीलाई १९ वर्षीय जेठो छोरा विराज, स्वराज र श्रीमती विद्या भट्टराईले दागबत्ती दिनुभयो । स्तब्ध भइरहँदा तुष राखेर आरोपको झोला भिराइएका स्टाटसले पनि सामाजिक सञ्जालका भित्ता एकाएक नपोतिएका होइनन् । दोषी को र निर्दोष को त्यो सत्य र प्रमाणले हुन्छ तर मृत्यु सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने दुखद् प्राकृतिक सत्य हो । तर, समाचारका विषय हिजो र आजको माहोललाई अलिकति नियाल्नुलाई हाम्रो नेपाली संस्कार र सोचसँग मूल्याङ्कन गरिनु सान्दर्भिक ठहर्ला । हाम्रो देशले साँच्चै विचित्रको घण्टी ठोकेर बुकुर्सी मार्ने रहेछ । मन्त्री अधिकारीलाई मृत्यु अघि वाइडबडीमा भ्रष्टाचारी भनेर समाचार आउँदा लगभग जनताको मनले आशाको उज्यालोमा धब्बा देखे । युवा तथा जुझारु नेतासँगको आशामा ताल्चा नै पनि मार्न भ्याए । जनताले सत्य खोतल्न सक्दैन तर सत्य मान्नुपर्ने आधार समाचार, खबर या सञ्चार जगत् नै हो ।
मृत्युले आखिर उहाँलाई बेलैमा लग्यो । अकल्पनीय दुखद् घटनाले मनलाई धेरैमा बेचैन तुल्यायो यद्यपि वाइडबडीको विषय कताकता सम्झनामा नराखेर पनि सुख दिएन । उहाँलाई समयले बाँच्न दिएन तर सञ्चारमाध्यमले यतिखेर उहाँलाई सक्रिय जुझारु नेता बनाएर प्रशंसा गर्दै छ– के गर्ने ? यी प्रशंसा उहाँले बाँचेकै दिनमा पनि सुन्न पाउनुभएको भए कति ऊर्जा मिल्थ्यो होला । सायद जीवित हुँदा वाइडबडीका कुराले उहाँको मन कति भाँच्चिएको हुँदो हो ! उहाँसहित सात जना व्यक्तित्वको निधनले देशलाई रुवायो । तब, एकाएक खोज पत्रकारिता जुर्मुरायो : बाँचुन्जेल तिरस्कार अनि मरेपछि बल्ल पुरस्कारका पोका भिरायो । हिजो ‘वाइडबडीका दोषी’ भनिएका दिनहुँजसोका खबर मृत्युपश्चात एकाएक निर्दोष बनेर प्रशंसनीय बनेर बटारिए । एक पक्षमा त राम्रो कुरा हो मान्छेलाई कमसेकम मरेर जाँदा भए पनि त प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर, एकाएक चामत्कारिक प्रशंसाका आवाज उसैगरी मिडियामय बन्न पुगे । अचम्म लाग्यो– देशमा के मिडियाफोबियामा जनताले दोषी देखाउँदा दोषी भन्नै पर्ने । मृत्युपश्चात् उहाँ युवा नेता, लेखक, विद्यार्थीकालदेखिकै होनहार र देशप्रेमी बन्न पुग्नुभयो ? त्यसअघि यी आवाज कुन चराका नाम थिए ?
कविशिरोमणिलाई सम्झन पुगेँ– “गुणीको दोष मेटिन्छ गुणका रासमा परी ।” मन्त्री अधिकारी स्वर्गीय बन्नुहुँदा मात्र सायद प्रशंसायोग्य हुनुभयो । उहाँका भिजन, कर्मको मूल्याङ्कन आज बल्ल हुँदै छन् । आखिर मन्त्री पद सम्हालेको ११ महिना त हुँदै थियो तर आकस्मिक घटनाले अपूरणीय क्षति भएको महसुस सबैमा भयो । बाँचुन्जेल अलिकति पनि खोज पत्रकारिता सक्रिय बनेर उहाँका सुकार्यका कुरा गर्न सक्रिय बनेन । उहाँका ऊर्जाशील भाव, पुस्तक लेखनका विषय, क्षमता र सक्रियता, विद्वता तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषय, नेपालका विभिन्न स्थानमा पर्यटकीय गन्तव्य खोतलिएका कुरा, भिजिट नेपाल २०२० लाई सार्थक र सफल बनाउने योजना तथा पर्यटक भिœयाउने कार्यनीतिको महानता आज ओकलिँदै छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको विकास गर्ने सोच, ब्ल्याक लिस्टमा राखिएको नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई हटाउने पहलमा उहाँका योगदान र सपना गाँसिएका छन् ।
मेडिकल टुरिजमसम्मका कुरा लगायतका विषयमा उहाँलाई जनताले हराएका होइनन् । दैवले जित्न दिएनन् । बिउ रोप्दै गर्दा फल नखाँदै मृत्यु भयो । मात्र दोष लाग्यो तर कर्मले प्रभाव देखाउन नपाउँदै त्यो आशा खाग बन्यो । त्यो भिजनलाई सलोट गर्दै उहाँसहित दुर्घटनामा पर्नुहुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पन्छु ।
हजारौँले देशका होनहार व्यक्तित्व गुमाए । अकल्पनीय घटनाले आँखामा आँसु बहायो । हिजो कालोमोसो दल्न तम्सने हात आज एकाएक पूmलको गुच्छा बोकेर सडकमा ओर्लिएछ । एकाएक मोडिफाइ भयो– त्यही तन, मन र वदन । जब रवीन्द्रको वदन त्यो पनि ठम्याउनै गाह्रो हुने कारुणिक बन्यो तब सम्मानको ओइरो । हिजो भ्रष्टाचारी भनिएर खनिएका फेसबुक, सामाजिक सञ्जालका अकरणयुक्त खबर मृत्युपश्चात करण भए । उहाँका योगदानका लामा पाना तिखारिएर बजारमा आए । बाँचुन्जेल तिरस्कार र लाञ्छनाको झोला भिराउने प्रतिपक्षी मन एकाएक प्रशंसाको ढोल बोकेर जनताभैmँ प्रिय समर्थक बन्यो । अहो ! नेपाल, के त साँच्चै ‘नेपालीको बुद्धि घुच्चुकमा हुन्छ ?’ अनि, बाँचुन्जेल हामी सत्य कुरालाई सत्य भन्न किन तर्सिन्छौँ ? मरेपछि एकाएक असत्य दबिन्छ भने सत्य मरेपछिका बाँकी जीवनका लागि मात्र हो ? आखिर सबैले एकदिन मर्नु त छ तर उहाँलाई बाँचेकै दिनमा पनि ‘तपाईँका यी यी कार्य महान् छन्, धन्यवाद !’ भन्ने आवाज कति महङ्गो भइदियो । यो देश मिडियाफोबियाको रोगले सिकिस्त भएछ । सायद, देश अब राम्रो र नराम्रो छुट्याउन नसक्ने अवस्थातिर धकेलिँदै छ भने सचेतना पनि त आवश्यक रहला ।
आफ्नै जिल्लामा घटना घट्दा मनले अशान्तिको एउटा गहिरो चोट पु¥यायो । घटना दोहोरिएको हो । मैले विगततिर फर्कने चेष्टा गरेँ– १३ वर्षअघि अर्थात् २०६२ सालमा ताप्लेजुङकै घुन्सा भन्ने ठाउँमा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई तथा उहाँकी पत्नी, भूगोलविद्÷वातावरणविद् हर्क गुरुङ, दुईजना विदेशी कर्मचारीहरू, सचिव तथा महानिर्देशक, फिनिस दूतावासका प्रतिनिधि, ताप्लेजुङकै विजय श्रेष्ठसहित २४ जना टोलीको विषादपूर्ण अन्त्य पनि यस्तै प्रतिकूल मौसमले बनाएको थियो । यसपटक पनि पर्यटन मन्त्रीसहित ७ जनाको टोलीको अन्त्य भएको घटनाले दोहो¥याएर मन दुखायो । आखिर ताप्लेजुङजस्ता पहाडी क्षेत्रमा हवाइ यात्रा गर्दा त्यहाँको वातावरणसँग पनि राम्ररी तालेमेल मिलाउनुपर्ने आवश्यकतामा ध्यान दिनैपर्ने रहेछ । नेपालले सात दशकको समयावधिमा हवाई उडानका विभिन्न समस्याका आधारमा ६८ वटा दुर्घटना व्यहोर्नु परेको छ । ३८ वटा हेलिकोप्टरको दुर्घटनाबाट ६५ जनाको ज्यान गएको तथ्य छ । यसपटकको यो दुर्घटनाको बारेमा सत्यतथ्य खोज्न भनेर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले चार सदस्यीय जाँच आयोगलाई अह्राएका समाचार छन् । वास्तविकता थाहा पाउनुभन्दा पूर्व पनि सर्वसाधारणको अनुमानले आवश्यक सावधानी तथा मौसमको प्रतिकूलताका विषयमा सोच्नुपर्ने राय प्रकट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुर्घटनाको विषाद स्मरण
बुधबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर फोनको घन्टी बज्यो । उठाएँ । फोन आफ्नै श्रीमतीको थियो । ‘तपाईँले थाहा पाउनुभयो, ताप्लेजुङमा रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकोप्टर बेपत्ता छ रे ?! मैले हाम्रो पात्रो अनलाइन पत्रिकामा भर्खरै पढेकी ।’ मैले भनेँ, अहँ ! यहाँ बत्ती छैन, नेट पनि छैन । कसरी अकस्मात् यस्तो अशुभ घटना घटेछ ?! । आफ्नो गृहजिल्लामा यस्तो घटना घट्नुले पनि मलाई साँच्चै स्तब्ध बनायो । घरतिर फोन सम्पर्क गरिहेरेँ तर सम्पर्क भएन । त्यसपछि मनमा आयो यस्ता खबरप्रति बढी अद्यावधिक हुने मित्र भीम न्यौपानेलाई सम्झेर फोन गरेँ । उनले भने, ‘अँ मैले पनि भर्खरै समाचार सुनेँ । हेलिकोप्टर नै बेपत्ता भयो रे । तेह्रथुममा एयरपोर्टको बारेमा अध्ययन गरेपछि पाथीभराबाट फर्कँदा रे । हेलिकोप्टरै पो बेपत्ता भयो रे ।’ यो आवाजले मनमा त्रास र अझ बढी पीडाबोध गरायो । गजुरी–१, धादिङको रोडमा आदरणीय मानवशास्त्री शरच्चन्द्र सिंखडा सर र म यत्ति खबर सुनेपछि बेलुकाको कलेज भएकाले कोठाबाट बाहिरियौँ । एकैछिनपछि श्रीमती कमलाले फेरि फोन गरिन्– ‘हेलिकोप्टरमा रवीन्द्र अधिकारी र पाइलटसहित सात जना रहेछन् । कोही पनि बाँचेनछन् ।’ शरदचन्द्र सरलाई अशुभ समाचार सुनाउन चाहेँ । मनमा खिन्नताको मुस्लो ओइरियो । देशको कुनै पनि एक नेता जसले काम गर्दै थिए, गर्न चाहँदै थिए सायद प्रतिफल पाउने समय बाँकी नै थियो होला । आखिर मृत्युमा जोसुकै होस् दुःखको आभास नहुने कुरा पनि त होइन । आकस्मिक दुर्घटनाले मनमा पिरलो पारिरह्यो । पीरको ज्वारभाटाले हिर्काए जस्तै भयो । मनमा सबै खाले विचारको दौडाहा चलि नै रह्यो । अकल्पनीय दुर्घटना भयो ।
शरदचन्द्र सर घटनाको अशुभ समाचार पस्केपश्चात् निकै समय बोल्नुभएन । उहाँको अनुहारतिर त मैले ध्यान दिइँन तर कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा भने म केही प्रतीक्षामा बसेभैmँ भएँछु । म एक्लै बर्बराउँदै थिएँ । छोटो आयु रहेछ । कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभएका आवाज मेरो मस्तिष्कमा अभैm ताजै छन् । दुःख व्यक्त गर्दै थिएँ । तर, शरद सरको मौनता देख्दा मलाई एक अचम्म मिश्रित लाग्दै थियो । गजुरीको पुलिस चौकी छेउमा पुगेपछि बाटो काट्ने सोच भयो । सर र म बाटो काट्न खोज्दै गर्दा सरको मौनता भङ्ग भयो । सर र म टक्क अडियौँ । सर मतिर फर्केर तब मात्र बोल्नुभयो– ‘मलाई साह्रै दुःख लाग्यो । पर्यटनमन्त्री अधिकारी मेरी साथी (विद्या भट्टराई) का श्रीमान् हुनुहुन्थ्यो । म त साहै्र दुखित भएँ । यो घटनाले साह्रै दुखित बनायो ।’ दुवै एकछिन मौन भयौँ ।
मनमा दौडाहा चल्यो । बेलुकाको कलेज भएकाले हामी कलेजकै पढ्ने पढाउने कार्यतिर अल्झियौँ । मनमा अशान्ति, बेचैन अनुभूत भई नै रह्यो । ताप्लेजुङ जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश भट्टराईको विशेष पहलमा ताप्लेजुङले रवीन्द्र अधिकारीसमेत्लाई दशैँअघि शुभकामना आदानप्रदान तथा ‘पाथीभरा सद्भावना दूत’को एक नूतक अवधारणाका साथमा एक परिचयात्मक कार्ड पनि वितरण गरिरहेको दृश्य मेरा आँखा अघि नाचिरह्यो । उक्त कार्यक्रममा ताप्लेजुङको विकासका बारेमा राम्रा र प्रभावकारी योजनाहरू बुनिएकाले खुसी पनि अनुभूत भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री अधिकारीको पर्यटकीय आवागमनको सुव्यवस्थामा उहाँको लगावलाई नियाल्ने मन भो । यस्तै गरेर अर्कोपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक भेलामा उहाँ उपस्थित हुनुभएर परिवर्तनशील भाव व्यक्त गर्नुभएको, पर्यटनका प्रगतिको विवरण पेश गरिरहनुभएको तस्बिर मेरा आँखाअघि गाढा धमिलो बन्दै थियो । वि.सं. २०२६ वैशाख २२ मा जन्मनुभएका व्यक्ति ४९ वर्ष (२०७५ फागुन १५) मै बित्नुसँग कति छोटो आयु रहेछ भन्ने भाव मडारियो । हो, वाइडबडी काण्डमा नाम जोडिएको हो तर यथार्थता सप्रमाण अघि नआउन्जेल को, कति र किन कसरी दोषी छन् त्यो भन्न त सकिन्न तर कुनै मानिसको मृत्यु हुनु सधैँका लागि अन्त्य हुनु हो– पीडा शिवाय अरु के हुन सक्छ । फेसबुकभरि हार्दिक श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन, अलबिदा आदि लेखेका विचारको पोस्टले स्वर्गवास/मुक्तिको कामना गरिरहेको देखिन्थ्यो । धेरैले दुःख मानिरहँदा केहीले आरोप र नकारात्मक विचारका साथमा ‘बाँचुञ्जेल गाली : मरेपछि शोक’ भन्ने भाव पनि पोखिरहेको देखिन्थ्यो ।
शवयात्राका समाचारका दृश्यले मनमा झनै एक शोकाकुल बनायो । गृहनगर कास्कीको दृश्यमा अलबिदा नभनी मनमा खटपट रहिरह्यो । राष्ट्रिय दैनिकका पानातिर हेरेँ, सबै विषाद र योगदानका विषयले मनलाई उजिल्यायो । देशले मन्त्रीका साथमा सात सपूत गुमायो । स्वयम् नागरिक उड्डयन मन्त्री उड्डयन यन्त्रमा सवार रहँदा दुर्घटना हुनु, देशका कोही पनि मृत्यु हुनु आपैmँमा दुःखद् घटना हो । एक व्यक्ति जसले मन्त्री भएर पद तथा गोपनियताको सपथ खाएको ११ महिना बित्दै गर्दा जीवनलीला समाप्त गर्नुप¥यो । विद्युतीय पत्रिकाहरूतिर आँखा लगाएँ । तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जानुभएको उहाँको टोलीलाई पाथीभरा दर्शनार्थ ताप्लेजुङ गएपछि प्रतिकूल वातावरणले सिकार बनायो । उहाँले दिनुभएको ‘समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति नै आखिर अन्तिम अभिव्यक्ति बन्न पुग्यो– ‘मेरो साथमा चुहानडाँडा एयरपोर्टको नक्सा, इस्टिमेट, डिजाइन सबै छ । पहिला २९ करोड भनिए पनि अहिलेको इस्टिमेट ८७ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ, निर्माणका लागि………..।’ उहाँका अन्तिम वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई स्वयम् चुहानडाँडा हेरेर आउनुस्’ भन्नुभएको छ भन्ने सन्दर्भ छ । आखिर समृद्धिका लागि उहाँका विचारमा दम अवश्य थिए…. तर, ती सपनामा अब साकार पार्ने अभिष्ट आवश्यक छ ।
देशका एक होनहार नागरिकसहित सात विशिष्ट व्यक्तित्वको निधन विषादपूर्ण रह्यो । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका, ‘संविधान सभा लोकतन्त्र र पुनर्संरचना’ र ‘समृद्ध नेपाल’ नामक दुईवटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने उहाँ दुई दशक अघिदेखि नै अनुसन्धान र राजनीतिक लेखहरूमा प्रकाशित भएको बुझिन्छ । पटक–पटकमा गरी ६ महिनाको जेल जीवन भोग्नुभएका उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएका महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन् । पार्टी राजनीति जेजस्तो भए पनि एक जुझारु युवाशक्तिले केही गर्न चाहँदैमा दुर्घटित हुनु देशका लागि अपूरणीय क्षति हो । कसैले जीवनमा यस्तो दुखद् विषादलाई भोग्नु नपरोस् । तर, मननीय छ हेलिकप्टरमा सवार सबैको मृत्यु उत्तिकै बराबर मृत्यु हो । हरेकदिनजसो यातायातमा भइरहेका जनताका दुर्घटना उत्तिकै विषादपूर्ण घटना हुन् । हरेक दुर्घटनाले यसैगरी घर–घरमा दिनहुँजसो अब कतै पनि नरुवाओस् । हरेक उडानमा, सार्वजनिक यात्रामा सार्थक आचारसंहिता र पूर्वाधारलाई दिगो व्यवस्थापनको खाँचो छ । संयमता र आवश्यकतामा रहेर पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ । आखिर मर्नु त सबैले पर्छ तर अकालमा दुर्घटित बन्दा खसेको आँसु साह्रै पोल्ने हुन्छ, सरकार, सरोकारवाला सबैमा चेतना रहोस् । मेरो मनमा बेचैनपनले लेखेटिरह्यो ।